घुडा, हाड जोर्नीहरु दुख्ने समस्या छ सामाधानका उपाए बारे डाक्टर सापका सुझाव सहित पढ्नुहोस - Mero Khabar Nepal
बिहान उठ्दा तपाईको घुँडा दुख्छ ? हिँड्न गाह्रो हुन्छ ? दुखाइको महसुस हुने गर्छ भने सजग हुनुहोस्। बाथरोगको लक्षण हुन सक्छ। वरिष्ठ बाथरोग विशेषज्ञ डा. विनित वैद्य भन्छन्, ‘बाथरोग लागेका व्यक्तिको जोर्नी बिहानपख दुख्ने गर्छ। कक्रक्क पार्छ। सुन्निन्छ।’ उनले जोर्नी कक्रक्क पार्दै जाँदा पछि बांगिने जोखिम पनि हुने बताए। उनका अनुसार बिहान औंला सुन्निने र घाम लागेपछि विस्तारै बस्दै जान्छ।
हातखुट्टाका जोर्नी सुन्निने
बिहानपख जोर्नी अरठ्ठ हुने
Prevभद्रगोलका बुढो सिते बा रियलमा यति हेण्डसम ! हिरोईन भन्दा राम्री श्रीमती र करोडौंको मालिक (भिडियो हेर्नुस)
Nextगर्मीमा सर्प बढि सक्रिय हुन्छन्, विषालु सर्पले टोके के गर्ने ?